Ukusuka kwiminithi yokuqala yokuzalwa kwayo umntwana udibana nemvelo: ucofa, amanzi, umoya kunye nezilwanyana ezincinci ... Akunjalo zonke ezi zinto zinomdla kwimpilo yakhe. Khusela umntwana wakho kwizinto ezinobundlobongela bendalo, kwindawo yokuqala, ukuba kufuneka ulusu - lulo lunye lweenkqubo eziphambili zomqobo zomzimba. Okubalulekileyo apha nendima kunye neembumba ze-mucous, ngakumbi kwimantombazana. Ukuba ngumqobo omkhulu ekukhuselweni, baya kugcina i-microflora yesalathisi somzimba ngokuqhelekileyo kwaye kuqinisekiswe ukubunjwa nokusebenza ngokuqhelekileyo kwinkqubo yokuzala. Kodwa kwiintsana, iimbumba ze-genitalia zangaphandle zihluke ngokuphawulekayo ukusuka kumfazi omdala, ngoko ke ucoceko lwezitho zentombazana kufuneka zizodwa.
Kwiimantombazana, iindlela zokuzivikela ngokwasemzimbeni zisebenza kwaye azizange zenziwe ngendlela yokusebenza, kwaye indima yeendlela zokuzivikela ezizimeleyo zingabonakali, njengoko ziqala ukuyilo. Uninzi unina bakholelwa ukuba amantombazana akufanele abe nemfihlo kwizitho zobulili. Le ngcamango iphosakeleyo. Kwixesha ngalinye leminyaka, ngokuqhelekileyo, kukho ukukhulelwa kwamanzi, okwenziwe ngamanzi, kunye neengqungquthela ezinobuncwane. Ngokumalunga neenguqu kwimvelaphi ye-hormonal, kwixesha elithile lobomi bomntwana, kunokunyuka ukwanda kwentsholongwane. Ininzi le nto iyenzeka kwiiveki zokuqala ezintathu ukuya kwezine, emva kweeminyaka ezisixhenxe ukuya kweyisithoba kunye neshumi elinesithathu. Ukongezelela, into eqhelekileyo le nto ingaba ngamantombazana athile kunye nama-blondes, abakhokelela kwiinkqubo zokuhlaselwa. Ukuze ufundise intombazana ukususela ebuntwaneni bokuqala ucoceko lwezitho ezithandana kunye nokunyamekela ulusu kunye neembumba, kufuneka ukwazi ezi zinto.
Isibambiso sempilo sihlambulukile.
Inxaxheba yococeko ekukhuselweni kwezifo ezivuthayo ze-genitalia zangaphandle zikhulu kakhulu. Isizathu esibalulekileyo sezifo ezinjalo ngokuchanekileyo ukuhluleka ukugcina imithetho eyimfuneko yohlambuluko. Kufuneka kukhunjulwe ukuba indawo yesini kufuneka ihlale isomile, ihlambuluke kwaye ifumanekile umoya, ngaphezu koko, ungavumeli ukugqithisa okanye ukugqithisa. AmaMom ahluke ngokucacileyo ukuhlamba okufanelekileyo komntwana. Abanye bahlamba umntwana ngokupheleleyo, kungabikho nto echaphazelekayo, abanye bakholelwa ukuba umntwana kufuneka ahlambuluke ezindlebeni ezinyaweni zemihla ngemihla ngoncedo lwesepha.
Ziziphi iimigaqo ezisisiseko?
Umntwana kufuneka abe nethawula yakhe, isambatho kunye nesepha.
Izambatho zangaphantsi zomntwana kufuneka zihlanjwe ngokwahlukileyo kwiingubo zangaphantsi zabazali.
Ukuhlamba izitho zangasese zomntwana akufanele kube kwisitya okanye kwindawo yokuhlambela, kodwa kuphela amanzi asebenzayo.
Ucoceko lwezitho zomntwana.
Kuba amanzi amancinane kakhulu kufuneka abiliswe. Ukuhlamba i-genitalia yangaphandle kufuneka ibe yinto yonke ngaphambi kokuba ulale, kwaye emva kwesenzo ngasinye sokuxhatshazwa, kuba ukuba i-feces ingena kwi-membrane yamalungu amancinci amancinci, inkqubo yokuvuvukala-vulvovagenitis ingahlakulela. Ngenxa yesizathu esifanayo, kubalulekile ukuhlawula ingqalelo imeko yomntwana we-diapers. Ukuhlamba kuqhutyelwa ngaphantsi komlambo wamanzi, ukusuka ngaphantsi kwesisu nase-anus, ungakhohlwa ukuhlamba izandla phambi kokuba.
Kwakukho iziganeko ezinomsindo ezinqamlekileyo zeembrane, xa umama esheshayo ukuhlamba umntwana, wancinciza izandla zakhe emva kokuqhekeza i-pepper yaseBulgaria, phakathi kokubanjelwa komlilo. Kubalulekile ukuba uhlambe ngamanzi acocekileyo ngaphandle kokufaka i-soda, i-permanganate ye-potassium okanye ezinye iindlela zokungasebenzi nge-disinfection. Ungazivumeli ukuba zifike kwiimbrane ezinqabileyo.
Ukuze uhlambuluke ngokobuni, iimveliso ezikhethekileyo okanye isepha lomntwana kufuneka zisetyenziswe.
Xa kukho i-diaper ukuphosa okanye ukucaphukisa, unokuhlamba intombazana ngesisombululo se-calendula, i-chamomile okanye i-sage, kodwa qaphela ukuba ungadluli ulusu. Ukusetyenziswa kwekhaya, isepha ye-antibacterial kunye nemveliso yokuhlambulula abantu abadala akuvumelekanga.
Kumantombazana angaphantsi kwe sixhenxe, i-mucosa yobuncwane iyingozi kakhulu, ngoko ayikhuthazwa ukuba isebenzise rhoqo isepha kwi-hygiene. Ngona insipho yobuntombi obuphezulu kakhulu ibangela ukomisa nokulungelelanisa izibophelelo, ezinokukhokelela ekuphuhliseni i-vulgar dermatitis. Kufuneka kusetyenziswe kuphela kwiimeko zokubaluleka (emva kwesenzo sokuchaswa), ngexesha lokuncinci kakhulu - kanye ngeveki enezindlu zangasese eziqhelekileyo. Yaye kufuneka isetyenziswe kuphela kwi-labia enkulu, igweme ukungena kwiintlobo zesini.
Emva kwenkqubo yokuhlamba, kuyimfuneko ukuwomisa isikhumba somntwana, usule iiplanga eziqhakaziweyo kunye ne-groin ngetayilu ecocekileyo kwaye, xa kuyimfuneko, ucoce nge-cream cream. Okwangoku, kwiivenkile nakwiipetromesi ukhetho olukhulu kakhulu lwamathambo kunye neentambo zezingane, ke ke, khumbula umthetho olula: ngcono ukhilimu, umbala omncinane kunye neqhumiso. Musa ukulibala malunga nomhla wokuphela. Kungekudala, isikhumba kunye neengxowa zesikhumba zesitho zangasese zafafazwa nge talc ukusuka kwinqanaba. Namhlanje bakholelwa ukuba oku akufanele kwenziwe, kule njongo kulunge ukusebenzisa i-cream ekhethekileyo ye-baby, i-peach okanye ioli yeoli.
Unomama omncinci banenkxalabo malunga ne-plaque emhlophe eyenziwe kwimihlaba ephakathi kwemilomo emikhulu neyincinci. Ngaba oku kungaba ngumqondiso we-thrush okanye ukuvuvukala? Hayi, ukuxhalaba ngale nto kuyinto engento. Le yi-smegma (imfihlelo yeengqungquthela ezixhambileyo zesitho zangasese), ukwenza umsebenzi okhuselayo. Imixube ye-smegma kufuneka isuswe nge-swab ye-gauze, eyayixutywe ngaphambili ngeoli ephekiweyo okanye i-petroleum jelly. Ungasebenzisi isepha. Ekudala, ukhetho lwe-smegma lugcinwa. Intombazana eselula ifanele ixelelwe malunga neendlela zokwenza i-plaque kunye ne-whitewash, ngenxa yokuba neentloni zokubuza unina, akazange ahlupheke.
Omnye umgaqo omkhulu kufuneka ube utshintsho lweentsuku zangaphantsi. I-Linen kubantwana kufuneka ikhethwe kuphela kwiimpawu zendalo - ilinen ephothiweyo, ikotoni. Ngenxa yengubo yangaphantsi eyenziwe ngezinto zokwenza izinto, umngcipheko we-non-specific vulvovaginitis (ukuvuvukala kwe-vulva) kwanda. Ukuma emfihlakalweni akuxhaswanga yimpahla yangaphantsi yokwenza iimpahla zangaphantsi, kwaye oku kuhambelana neenkqubo zokushushumbisa nokuphuphuma umoya, ezinokukhokelela ekuphuhliseni i-dysbiosis. Iingubo zangaphantsi, eziqalise kumgangatho ongaphakathi, nazo azicetyiswa, kuba iinqununu ze-nap zinokusihlamba ulusu okanye zize zingene kwisiswini, oko kubangela ukuvuvukala.
Kubalulekile ukufundisa umntwana kwizakhono zobomi bobuqu ukususela kwiintsuku zokuqala zobomi bakhe, ukwenzela ukuba iinkqubo zemihla ngemihla zibe yimbopheleleko kunye nemeko yendalo. Siyabulela kule nto, iingxaki ezininzi zingagwenywa, kungekhona kuphela kubuntwaneni bokuqala, kodwa nokukhusela ezininzi izifo ngexesha lokutshintshela abantu abadala.
Indlela yokuphatha i-dysbacteriosis kwintsana?
Iimpawu. Iimpawu. Unyango
Izibonakaliso zesisu esicasulayo kumntwana
I-Pink lichen kubantwana
Ukuhlalisa umntwana kwiinyawo
Unyango lwonyango kubantwana: umendo wokuvisisana ngokomoya
Izinzuzo ekuphumleni okusebenzayo
Yintoni eyona ndlela yonyango olungcono kumntwana?
Eyona nkxalabo yokulungelelanisa kwengqondo yabantwana besikolo sokuqala esikolweni
Indlela yokubuyisela ubuhlobo emva kokungcatsha indoda?
Iimfihlelo ze-wardrobe yesitayela: indlela yokugqoka ipaki